Lenovo က ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Lenovo က ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဂရိတ်မျက်နှာပြင်, ကြံ့ခိုင်ဒီဇိုင်း, တောက်ပသောကီးဘုတ်နဲ့ Thunderbolt3တစ်ဦးအစွမ်းထက်ပေါင်းစပ်တတိယမျိုးဆက် ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုအောင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Lenovo က ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: က Surface Pro ကိုအဖြစ်ပေမယ်ကို USB-C ကိုနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းသော” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, ကြာသပတေးနေ့ 11 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2018 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Lenovo ရဲ့တတိယမျိုးဆက် ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုမစေ့စပ်ညှိနှိုင်းကို Windows ဖြစ်ဖို့ရည်မှန်း 10 အသုံးပြုသူများသည်အဘယ်အရာကို Microsoft ၏ Surface မပေးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့: USB မှတ်-C နှင့် Thunderbolt 3.
ပုံစံအချက်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်. အမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာပိုကောင်းစာရိုက်တစ်ခုထောင့်ပေါ်တက်ထိုင်သောနောက်ကျောနှင့်သံလိုက်ပူးတွဲကီးဘုတ်ထဲက kickstand နဲ့ 8.9mm အထူတက်ဘလက်သို့ညှစ်နေသည်.
သို့သော်ဤနေရာတွင် Lenovo ကအနိုင်ရရိုးရှင်းသောက Surface ထံမှ 2-in-1 ပုံသေနည်းထွက်ခွာ, ထိုကဲ့သို့သောထောက်ပြနို့သီးခေါင်းအဖြစ် ThinkPad အဓိကဆောင်ခဲ့, trackpad ခလုတ်, ရေပုံး-shaped ကီးဘုတ်ခလုတ်များကိုနှင့် optional ကိုလမ်း-စစ်သည်တော်ဆွဲဆောင် 4G.
ဒီစင်ကြယ်သောလိုမျိုးတော့ဆိုဖို့မင့်, ဒါပေမယ့် Matt-အနက်ရောင်ဆေးသုတ်အလုပ်, ရှေးခေတ်-ရှာဖွေနေ ThinkPad လိုဂိုနဲ့အနီရောင်ဟိုက်လိုက်ဆက်ဆက်ဒီစက်ပစ္စည်းပစ္စယအမှုကိုပြုတဲ့အကြောင်းထင်မြင်ပေးပါ.
အဆိုပါ 13in မျက်နှာပြင်ကိုသင်အပေါ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထက်ပိုကြီးဖြစ်ပါသည် က Surface Pro ကို ပြီးနောက် ဧဝက V ကို, နှင့်ကပိုမိုလွယ်ကူမယ့်လက်ပ်တော့အဖြစ်တစ်ကိုယ်တော်သုံးစွဲဖို့စေသည်. မျက်နှာပြင်ကိုယ်တိုင်က pin ကို-ချွန်ထက်ဖြစ်ပါသည်, ရောင်စုံများနှင့်အိမ်ပြင်သုံးစွဲဖို့အလုံအလောက်မယ့်အကြောင်းကိုတောက်ပ. movies ပေါ်မှာအကြီးကြည့်ရှု, ကောင်းသောမြင်ကွင်းထောင့်နှင့်အတူ, နှင့်ပြင်ပပတ်လည်ရှိ bezel အတော်လေးကြီးမားရှိနေစဉ်, သူတို့နှစ်ဦးကို front-facing speakers လိုက်လျောညီထွေ, တစ်လက်ဗွေစကင်နာများနှင့်တစ်ဦး Windows ကိုမင်္ဂလာပါ-enabled မှာ IR မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု system ကို.
အဆိုပါ kickstand ကို Surface Pro ကိုပေါ်ပြီးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့တက်ဘလက်တက် propping ဘို့ဝေးအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကကဲ့သို့ကောင်း, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်ထားဖြစ်စေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ကျောတွင်ရွေ့လျားမှု၏ကျယ်ပြန့်ထောင့်နဲ့အစိုင်အခဲ-ခံစားမှု kickstand ဖြစ်ပါသည်, က Surface Pro ၏နောက်ကျောအပေါ်ကြောင်းအဖြစ်နည်းတူကောင်းမြတ်သောအရာသည်, နှင့်သင့်ရင်ခွင်သို့မဟုတ်စားပွဲခုံပေါ်တွင်လက်ျာဘက်ထောင့်ရတဲ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော.
အဆိုပါ front-facing speakers မီဒီယာစက်အဖြစ် X1 သည် Tablet ကိုအသုံးပြုဖြစ်ကောင်းအားနည်းအချက်များမှာ, သူတို့အတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပုံပျက်-အခမဲ့သော်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သူတို့သည်လည်းအလွန်ကျယ်လောင်သောမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဘေ့စမဆိုမျိုးကင်းမဲ့. သငျသညျလက်ကိုကိုင်ပြီးတစ်တီဗွီရှိုးစောင့်ကြည့်ဖို့စက်ဆိုရင်သူတို့ကဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခု extractor ပန်ကာကိုကျော်ပေါ်မယ့်အရာကိုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ကြားနာနေချိန်တွင်တစ်ခုခုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့မသွားလာရင်းဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ X1 သည် Tablet ကိုအများဆုံးထက်ပိုမိုတာရှည်ခံဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. မျက်နှာပြင် Gorilla Glass ကိုတစ်စာရွက်ထဲမှာဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်, ယှဉ်ပြိုင်အများစုနဲ့တူ, ဒါပေမယ့် ThinkPad line ကိုစိုထိုင်းဆဆန့်ကျင်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အပိုမိုင်သွား၏သမိုင်းရှိပါတယ်, တုန်ခါမှုနှင့်စက်မှုစျေးမှာ, ဒါကြောင့်ပေးရတဲ့များ၏နေ့စဉ် jolts နှင့် jostles နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သငျ့သညျအဓိပ်ပာယျ.
Screen ကို: 13QHD + LCD ကိုအတွက်
processor: Intel က Quad-core Core i5 သို့မဟုတ် i7 (8ကြိမ်မြောက်မျိုးဆက်)
သိုလှောင်ခြင်း: 256, 512GB အထိသို့မဟုတ် 1TB SSD ကို
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows ကို 10 မူလစာမျက်နှာသို့မဟုတ် Pro ကို
ကင်မရာကို: 8အမတ်နောက်ဘက်, 2အမတ်ရှေ့-face
connectivity ကို: wifi ac, ဘလူးတုသ် 4.1, 2x က Thunderbolt3(ကို USB-C ကို), နားကြပ်, TPM, သော microSD, မကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှု, လက်ဗွေစကင်နာ, optional ကို nano SIM နှင့် NFC ကို
ဒိုင်မန်းရှင်း: 304.1 x က 226 x 8.9 (15.1ကီးဘုတ်နှင့်အတူမီလီမီတာ)
အလေးချိန်: 890ဂရမ် (1,270ကီးဘုတ်နှင့်အတူပါ g)
high-end က Ultraportable စွမ်းဆောင်ရည်ကို
တက်ဘလက်နှင့်ကီးဘုတ်သံလိုက်နှင့်အတူဖမ်းယူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ X ကိုစီးရီး Lenovo ရဲ့ထိပ်တန်းအဆုံး ThinkPad လိုင်းဖြစ်ပါသည်, သော X1 သည် Tablet ကိုဆိုလိုတယ်သင်လိုချင်သောဖွယ်ရှိနေအားလုံးပါဝါနှင့်တကွကြွလာ.
ဒါကနောက်ဆုံးပေါ်အဋ္ဌမမျိုးဆက် Quad-core Intel က i5 မှသို့မဟုတ် i7 processor ကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်, 8 သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှု RAM နဲ့ဝပြောသော 16GB.
စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်စက်တစ် Intel Core i7-8550U ပရိုဆက်ဆာခဲ့, 16RAM ကို GB ကို, 512သိုလှောင်မှုနဲ့ 4G ၏ GB အထိ, နှင့်လုံးဝငါမှာပစ်ချအရာအားလုံးမှတဆင့်ပျံသန်း.
အဆိုပါပေါင်းစည်း Intel က UHD နေစဉ် 620 ဂရပ်ဖစ်ကဒ် X1 သည်တက်ဘလက်၏အနည်းဆုံးအမှတ်ဖြစ်နိုင်သည်, စက်တစ်ချွေးသိပ်ခြိုးဖောကျမရှိဘဲအချို့ကြီးမား 23,000-pixel ကျယ်ပြန့်ပုံရိပ်တွေကိုကိုင်တွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲ.
တက်ဘလက်အတွက်ပရိသတ်တွေပိုပြီးမကြာခဏအချို့ပြိုင်ဘက်ထက်တက်ပစ်ခတ်, သငျသညျအလွန် Processor ကို-intensive တစ်ခုခုလုပ်နေလုပ်နေမဟုတ်လျှင်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းအထူးသဖြင့်အသံကျယ်မရကြဘူး. သူတို့တစ်ရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင် inaudible နေအချိန်အများစုမှာ.
ယေဘုယျအားစွမ်းဆောင်ရည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, High-end က Ultraportable စက်၏ကိုက်ညီ, ဒါပေမယ့်အပေါ်အမာခံဂိမ်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြဘူး - ငါပြင်ပဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူကမကြိုးစားခဲ့ပါဘူး.
အဆိုပါ Matt အနက်ရောင်အနည်းငယ်မှိုင်းကြည့်, ဒါပေမယ့်ခြစ်ခြင်းနှင့် scuff ကောင်းစွာခုခံတွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူခံစားရ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အများဆုံး PC ကို tablet များအတွက်ယဇျပူဇျောရဲ့သောအရာတစျခုမှာဘက်ထရီသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်. Lenovo ကကိုး-and တစ်နှစ်ခွဲနာရီ "ကိုပိုမို-ထက်-All-နေ့ 'ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုးကား, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့ ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုစွဲချက်အကြားသာန်းကျင်ခုနစ်ခုနာရီကြာဖြစ်ပါသည်. အဲဒီတက်ကြွကို " သာ. ကောင်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်း" တန်ခိုး setting ကိုအတူရှိ၏, Typora အတွက်စကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့, Chrome မှာကြည့်ရှုခြင်း, Nextgen စာဖတ်သူကိုသုံးပြီး, ဆှဖှေဲ့ဓာတ်ပုံနှင့် Microsoft မေးလ်အီးမေးလ်အများကြီးထဲမှာတချို့ပုံရိပ်တည်းဖြတ်ခြင်း.
တနေ့အလုပ်အများဆုံးမှတဆင့်ရရန်လုံလောက်ဒါဟာင်, ဒါပေမယ့်အထူးကြပ်မတ်ရက်အိမ်မှာအားသွင်းထားခဲ့ဖို့မလုံလောကျ. ဒါကြောင့်အားသွင်းဖို့က USB, Power Delivery ကိုအသုံးပြုသည်ကျေးဇူးတင်စရာအဖြစ်, လုံလောက်သော wattage နှင့်အတူမည်သည့်ကို USB-C ကို charger ကိုထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားလက်တော့ပ်သို့မဟုတ်ပင် 30W ထုတ်ချပြီး Multi-အားသွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတူတင်ပို့သူတွေကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်.
Thunderbolt3ဆိပ်ကမ်းများ
နှစျခု Thunderbolt3ဆိပ်ကမ်းများ, တစ်ဦး Kensington သော့ခတ် slot ကနှင့် sim ဗန်းအားလုံးတဦးတည်းအခြမ်း၌ရှိကြ၏. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ X1 သည် Tablet ကိုဖွင့်နှစ်ခု Thunderbolt နှင့်တကွကြွလာ3USB မှတ်-C အဆိပ်ကမ်းများအဖြစ်နှစ်ဆကြောင်းဆိပ်ကမ်းများ. Thunderbolt ထားရှိခြင်း3ချဲ့ထွင်စွမ်းရည်အဆုံးမဲ့များမှာကဲ့သို့ကြီးမား Boon ဖြစ်ပါသည်, အားသွင်းဖို့တစျကြိုး၏သန့်ရှင်းသော grail အပါအဝင်, သင်တို့တွင်အထင်နိုငျ 4K မော်နီတာနှင့်သည်အခြားရံ connect. သူကတောင်ကို USB-C အကင်းမဲ့ကြောင်းပြိုင်ဘက်အပေါ်သိသိသာသာအသာစီးင်.
သို့သော်, နှစ်ခုသာဆိပ်ကမ်းများရှိခြင်း, ပါဝါအဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်တဦးတည်း, အထိုင်သို့မဟုတ်အချက်အချာအပေါ်အားကိုးကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာအများဆုံးများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကြီးတွေသဘောတူညီမှုမရင့်, သငျသညျအခြို့သောမျိုးတစ် dock ကိုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ပါဘူးလျှင်မူကားဆိပ်ကမ်းကို-juggling တစ်နည်းနည်းလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပါသည်.
ကာ microSD card ကိုစာဖတ်သူလည်းရှိပါတယ်, သည်ကြီးမြတ်တော်မူသော, ဒါပေမယ့်သင်ကစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သောအရာနှင့်အလားတူတစ်ဦး sim-slot က၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောရဲ့. သင်ကထွက်ရမယ့် sim ejector tool ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ပူပြင်းတဲ့-swappable မှတ်ဉာဏ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုအဖြစ်လက်တွေ့ကျတဲ့မဟုတ်ဘူး, သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာတဦးတည်းရရှိပါသည်လျှင်ကြောင့် 4G sim ejecting ဆိုလိုတယ်.
ကီးဘုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, အများစု Laptop တွေထက်ပိုမိုကောင်းမွန်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Microsoft ၏ Surface Pro ကိုမတူဘဲ, အဆိုပါ X1 သည် Tablet ကိုကီးဘုတ်နှင့်တကွကြွလာ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်ကီးဘုတ်က. Windows ကို 10 ထိုကဲ့သို့သောဒီကီးဘုတ်များ၏အရည်အသွေးအားဖြင့်အသက်ရှင်သို့မဟုတ်သေဆုံးအဖြစ် detach, သူတို့တစ်တွေလက်ပ်တော့များကဲ့သို့အသုံးပြုခဲ့နေတဲ့အချိန်အများစုကိုအဖြစ်.
Lenovo ရဲ့ကီးဘုတ်ငါမဆိုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပေါ်တွင်အသုံးပြုထားသောအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, နှင့် laptop ရဲ့ကျယ်ပြန့်အများစုထက် သာ. ကောင်း၏. သော့ full-size များမှာ, ခိုင်မာသော, သင့်ရဲ့လက်ချောင်းအောက်မှာကြီးမြတ်ခံစားရပြီးအဆင်ပြေစေဖို့လုံလောက်တဲ့ခရီးသွားကြ, ကျေနပ်စရာစာရိုက်အတွေ့အကြုံကို.
အဆိုပါ trackpad အညီအမျှကောင်းလှ၏. ဒါဟာတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့င်, ချောမွေ့ရှိပါတယ်, တိကျသောမျက်နှာပြင်နှင့်တစ်ဦးအစိုင်အခဲကလစ်, အဖြစ်အတွေ့အကြုံစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများများ. သို့သော်တစ်ဦး ThinkPad မှခှနျအားဂျီအကြားနည်းနည်းအနီရောင်နို့သီးခေါင်း TrackPoint ၏ပုံစံတွင်လည်းရှိရဲ့, H ကိုနှင့် B သော့, အဆိုပါ spacebar နှင့် trackpad အကြားနှင့်သုံး mouse ကိုခလုတ်. ငါအခါကီးဘုတ်၏ဆုံး trackpad ပိတ်ဆို့ခြင်းသုည legroom ခြင်းဖြင့်ငါ၏အအူသို့တက်ဖိခံခဲ့ရတဲ့မီးရထားပေါ် မှလွဲ. ထိုသူတို့အဘို့အနည်းငယ်သာအသုံးပြုမှုတွေ့ရှိရ.
ကီးဘုတ်က၎င်း၏ quirks မ, ထိုကဲ့သို့သောအစား Ctrl + ၏အောက်ဆုံးလက်ဝဲထောင့်ရှိ Fn Key ကိုအဖြစ်, ကျွန်မချက်ချင်းနီးပါးကြွက်သား-မှတ်ဉာဏ်ကို cut များနှင့်ငါးပိများအတွက် setting တွင်လှည့်လည်ပြောင်းခဲ့ရာတစ်ခုခုကို. မည်သည့်မီဒီယာသော့ဖြစ်စေရှိပါတယ်မဟုတ်.
အဆိုပါလက်ဗွေစကင်နာနည်းနည်းထူးဆန်း set ကိုတက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကမကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှု system ကိုအသုံးပြုချင်ကြဘူးသည့်အခါကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ X1 သည် Tablet ကို Microsoft ၏ Surface လိုင်းပေါ်ကြောင်းအဖြစ်နည်းတူကောင်းပါတယ်တစ်ခုမှာ IR-based facial အသိအမှတ်ပြုမှု system ကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကနေသင်တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်၌သငျတွင်းသို့, ရဲ့ login ချောမွေ့စွာအောင်.
တစ်လက်ဗွေစကင်နာလည်းရှိပါတယ်, မူသောသင်တို့လက်ဗွေမှတ်ပုံတင်ဖို့အဘို့အနှိပ်များနှင့်ပွတ်ဆွဲခြင်းတစ်ဦးအနည်းငယ်ထူးဆန်းပေါင်းစပ်ထားသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ရက်-to-နေ့ကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. မျက်နှာကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်အောင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်ငါစားပွဲခုံမှာသုံးပြီးတက်အဆုံးသတ်မပြုခဲ့, ဒါပေမယ့်ပုံတူတိမ်းညွတ်အတွက်လက်ကိုင်အခါတက်ဘလက်သော့ဖွင့်ဘို့အအသုံးဝင်သောခဲ့သည်, နှင့်ပိုမို biometric ရွေးချယ်စရာပိုကောင်း.
သင်ပါဝါခလုတ်ဝင်တိုက်ဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ်ပေါ် Fn Key ကိုနှိပ်ဖို့ရှိသည်ကီးဘုတ်ဖွင့်ကနေ X1 သည် Tablet ကိုဖွင့်ဖို့
သငျသညျကို Windows တစ်ဦးရွေးချယ်မှုအရ 10 မူလစာမျက်နှာသို့မဟုတ် Pro ကို
တစ်လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူစက်၏ဘေးထွက်သို့ optional ကို ThinkPad ကလောင် Pro ကိုကလစ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုတက် marking သို့မဟုတ်လက်မှတ်ထိုးများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်
အဆိုပါ Lenovo က Vantage app ကိုအနည်းငယ်မျှသာပျော့သွားတာကိုနှင့်အတူ bespoke အဆိုပါ X1 သည် Tablet ကိုမှယာဉ်မောင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် setting များကိုစောင့်ရှောက်ကြာ
တတိယမျိုးဆက် Lenovo က ThinkPad X1 သည်တက်ဘလက်မှာစတင်သည် £ 1,480 တစ်ဦး Core i5 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ, 8RAM ကို GB ကို, 256သိုလှောင်မှုနဲ့ကီးဘုတ်၏ GB အထိအပေါင်းတို့နှင့်အတူရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ£ 2,422 မှာထွက်ထိပ်ဆုံးမှ.
စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်စက်တစ် Core i7 processor နဲ့£ 1,973.59 ကုန်ကျ, 16RAM ကို GB ကို, 512သိုလှောင်မှုနဲ့ 4G ၏ GB အထိ.
နှိုင်းယှဉ်, Microsoft ၏ Surface Pro ကို6စတင်မှာ £ 879, မော်ဒယ်အလားတူ X1 သည် Tablet ကိုမှစျေးနှုန်းနှင့်အတူ.
အဆိုပါ ThinkPad X1 သည် Tablet ကို Lenovo ကအလွန်ကြီးစွာသောလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ 2-in-1 က Windows စေနိုငျသောထေူ 10 တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာ. ဒါဟာစျေးပေါမဟုတ်ဘူး, သို့သော်၎င်း၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြိုင်ဘက်ထက်အလားတူသို့မဟုတ်ပိုကောင်းသတ်မှတ်ချက်များကို Microsoft က Surface Pro ကိုကမ်းလှမ်း, Thunderbolt များ၏အများကြီးလိုအပ်နေသောခေတ်မီဆိပ်ကမ်းကိုရွေးချယ်ရေးအပါအဝင် 3.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးရိုက်နှက်မှုယူနိုင်ပြီးမိုဘိုင်းအလုပ်လုပ်၏ကွံပရှင်သန်လိမ့်မယ်လို X1 သည် Tablet ကိုခံစားရ, ထိုသို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ရာရာဖြစ်ပါသည်. မျက်နှာပြင်သည်ကြီး, နှင့် 13in မှာစံပြအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ kickstand နှင့်ကီးဘုတ်တောက်ပဖြစ်ကြပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပါသည်.
ခုနစျပါးနာရီဘက်ထရီသက်တမ်းပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘက်ပေါင်းစုံ 4G နှစ်ယောက် biometric ရွေးချယ်စရာကြိုဆိုဖြည့်စွက်များမှာ. ဒါဟာနေဆဲကစားထက်အလုပ်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့စက်ရဲ့, သင်ပြုချင်သမျှသောအခန်းကိုဖြတ်ပြီးမှဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်ဒါပေမယ့်နှစ်ဆတာဝန်ဆွဲထုတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းလှ၏.
သင်တစ်ဦးထိပ်တန်းအဆုံး 2-in-1 Windows အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် 10 ခှဲခွားနိုငျသော, အဆိုပါ Lenovo က ThinkPad X1 သည် Tablet ကိုသင့်ရဲ့စာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်သင့်.
အကောင်းအဆိုး: အစိုင်အခဲဆောက်လုပ်ရေး, ကောင်းသောမျက်နှာပြင်, တောက်ပသောကီးဘုတ်, Thunderbolt 3, optional ကို 4G, microSD ကဒ်စာဖတ်သူကို, လက်ဗွေစကင်နာ, မကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှု
Cons: နှစ်ခုသာကို USB-C အဆိပ်ကမ်းများ, အလွယ်တကူမရ microSD ကဒ်စာဖတ်သူကို, စျေးကြီး
စက် standby ၌တည်ရှိ၏အခါ '' ဈ '' ပေါ်တွင်အနီရောင်အစက် glows. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Microsoft က Surface က Go ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ပြဇာတ်ထက်အလုပ်အတွက်ပိုကောင်းရဲ့တက်ဘလက်
← Google Launches Pixel3Smartphones and Pixel Slate Tablet အမေဇုံရေယဉ် Kindle Paperwhite လွှတ်တင် →